NLC: Abubọ ọrụ ga-eso akwụghị ụgwọ opekatampe' - BBC News Ìgbò
NLC: Abubọ ọrụ ga-eso akwụghị ụgwọ opekatampe'
31 Mee 2018
Nkenke aha onyonyo Otu NLC bụ otu na-agba mbọ maka ọdịmma ndị ọrụ
Otu na-ahụ maka ndị ọrụ a na-akpọ Nigeria Labour Congress(NLC) na Bekee ekwuola na ọ bụrụ n'ọnwa Septemba bịa na njedebe ma gọọmenti emezughị nkwa ibulite ụgwọọrụ opekatampe, ha chere aka ghọrọ abụbọọrụ.
Osote onyeisi NLC bụ Issa Aremu kwuru nke a na mkparịtaụka ya na BBC nwere sịrị na igbuwanye oge na imejupụta atụmatụ ụgwọọrụ opekatampe ga-emetụta akụnaụba ala Naijiria.
'Gọọmentị agaghị akwụnwụ ụgwọ onwa ọhụrụ'
NLC akatọla ego nrite ndị omeiwu
Na nsonso a, mịnịsta na-ahụ maka ọrụ bụ Chris Ngige kwuru na imezu nkwa ibuli ụgwọọrụ opekatampe agaghị ekwe omume n'ọnwa Septemba.
Dịka Ngige siri kọwa, "Ọ bụ n'ọnwa Septemba ka kọmiti e hiwere maka ụgwọọrụ opekatampe ga-enyefe gọọmenti ozi ha chịkọtara n'ihe ha mere ka gọọmenti lebanye ya anya tupu ezigara ndị ụlọomeiwu akwụkwọ ahụ".
"Ihe anyị na-ekwu bụ na ndị niile ọ gbasara gụnyere mịnịsta na-ahụ maka ọrụ ma na ọ gafeela afọ abụọ na ọkara maọbụ afọ atọ anyị kwuwere okwu ụgwọọrụ opekatampe. Ya mere, anyị agaghị edi igbu oge ọbụla.
"Oge ikpeazụ e tinyere ụgwọọrụ opekatampe bụ n'afọ 2010 nke e kwesịrị ị na-emegharị kwa afọ ise ọbụla."
Aremụ gara n'ihu kwuo na "Ọ bụrụ na ọnwa Septemba gwụchaa ma otu ndị ọrụ anụghị ihe ọbụla banyere ụgwọọrụ opekatampe n'aka gọọmenti, abụbọọrụ ga ebiri ọkụ n'ala Naịjirịa niile.
"Nke a bụ agba nke isi anyị na-ekwu okwu na Naijiria.
Ọbụrụ na gọọmenti e tinyeghị aka n'akwụkwọ maka ụgwọọrụ ahụ, ha chere aka ghọrọ abụbụọrụ n'ihi na nke a agahị abụ mbụ maka na ya bụ ihe anyị mere n'afọ 2010, n'oge ọchịchị Goodluck Jonathan."
Ejidela ndị otu Biafra wakporo ụlọọrụ Gọvanọ Enugwu
May 30: 'Ndị IPOB adaghị iwu'
Arewa achọghị ka Ipob nọrọ n'ụlọ echi
Ihe 8 onyeisala Buhari kwuru maka ụmụaka taa
Man Utd ahụla Liverpool teta n'ụra ọnwụ
Ọ bụ nwa nwoke! - Davido
Nnamdi Kanu ebola ọnwụ nne ya n'isi ndịagha Naịjịrịa